Qaab duritaanka, Qalabka caaryada caaga, Qaybaha wax taaj oo kale caaga - Enuo Qaab
HABA AQBALO B2B AMA MASHRUUCYADA B2C, WAAN KUU FARXSANAHAY IN AAD OGAATO FIKRADAADA
DIIRADA KU SAABSAN MADASHA 21+ SANO:
HAL JOOJI ISTICMAALKA XALALKA BULSHADA
Samee noocyo ku daabac 3D ama CNC
Mashiinnada saxda ah ee mashiinnada saxda ah ku shaqeeya
Qalabka golaha iyo sameynta cabbiraadda cabbirka
Nooca / caag wax soo saarka Mass & samaynta caaryada dhinta-shubay
MISE CAASIMAD AH
Caaga & Silicon & dhinta-shubay qaybo saarka
KU SAABSAN MADADA ENUO
-Wordku waa inuu noqdaa mid daacad ah maadaama ballanku yahay deyn!
Shirkadda waxay ku guuleysatay dib u dejinta dhirta cusub bishii Abriil 2017, aagga dhirta warshadaha cusub ee dhirta ah ee mitir laba jibbaaran, oo lagu buuxiyo xarun sax ah oo CNC ah, mashiinnada EDM, mashiinnada wax shiida, mashiinnada wax shiida, tijaabinta iyo qalab kale oo gebi ahaanba ka badan 30 nooc, saddex koox oo isku dhaf ah ayaa ka mid ah. Wiishka Workshop culeyska kor u qaadista ugu badan oo ah 15 tan, oo leh wax soo saar sanadle ah 100 nooc, iyo wasakhda ugu weyn ayaa culeys gaaraya illaa 30 Tan oo karti leh.
Tartan ku saabsan suuqa caaryada, tartanka aasaasiga ah ee shirkadda wuxuu ka yimaadaa kooxda injineernimada iyo wax soo saarka khibradda leh. Mashruuca, qaabeynta iyo soosaarida xubnaha maareynta aasaasiga ah dhammaantood waxay leeyihiin waayo-aragnimo shaqo oo wax ku ool ah dukaan shaqo sannado badan, waxayna leeyihiin in ka badan 10 sano oo khibrad maarayn waaxeed ah, oo si fiican u bartay isuduwidda kheyraadka si loo xalliyo labada dhibco xanuun ee warshadaha waaweyn- tayada iyo waqtiga ugu dambeeya. Iyaga dhexdooda, kooxda nashqadeynta waxay si toos ah ugu lug laheyd naqshadeynta caaryada Marelli AL / Magna / Valeo auto auto; Mahle-Behr haanta & biyaha haanta otomaatiga iyo qeybta qaboojiyaha taageere; Qaybaha gawaarida qorraxda ee Inalfa; Qalabka HCM ee gudaha iyo dibedda; INTEC / ARMADA (Nissan) qaybo dhisme oo otomaatig ah, LEIFHEIT qeybaha guryaha. Kooxda mashruuca waxay hagaysay qaab-dhismeedka wasakhda CK / Mahle-Behr / Valeo haanta & haanta biyaha iyo qaybta qaboojiyaha taageerayaasha; Sogefi iridda iyo tubooyinka, Sinocene / Toyota synthetic gudaha iyo dibedda qaybaha qaabdhismeedka, EATON qaybaha haanta shidaalka, qalabka korontada ee ABB iyo IKEA wax soo saarka guryaha.
Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay sameysay isbahaysi horumarineed xubnaha kale ee kooxda BHD, waxaan ku siin karnaa adeeg hal-joog ah naqshadeynta caaryada iyo wax soo saarka, naqshadeynta qalabka kormeerka iyo soo saarista, cirbadeynta alaabada caagga ah, buufinta iyo isku imaatinka.
Sawirkee ayaad ka dooran doontaa dhamaadka farshaxankan
Immisa ayaad ka ogtahay cilladaha qayb ka mid ahaanta - calaamadaha
Xalka lagu xakameynayo qallooca haanta & haanta-qaybta wax ka beddelka haanta